December 21, 2020 - Khitalin Media
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဖြတ်ချင်လာပြီဆိုရင် ယောက်ျားလေးတွေ လုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမူများ
သမီးရည်းစား Relationship တစ်ခုမှာ ကိုယ့်ချစ်သူက ကိုယ့်ကို စိတ်ကုန် လာပြီလားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်က မိန်းကလေးတွေမှာ ပိုတွေ့ရတတ်ပါတယ်။စစ်တမ်းတွေအရဆိုရင် Relationship တွေမှာ မိန်းကလေးတွေဘက်ကနေ အရင် စပြီး လမ်းခွဲတာများပါတယ်။ ယောက်ျားအများစုက လမ်း ခွဲရအောင်ဆိုတဲ့ စကား ကို သူတို့ဘက်ကနေ အရင်စပြီး ပါးစပ်ကနေ ဖွင့်မပြောပေမယ့် တစ်ဖက် မိန်း ကလေး သူ့အပေါ် စိတ်ပျက်ပြီး လမ်းခွဲချင်လာအောင် လုပ်ပြ၊နေပြတ တ်ကြ ပါ တယ်။ နှုတ်ကနေ၊ပါးစပ်ကနေ ထုတ်မပြောပေမယ့် သူကိုယ့်ကို လမ်းခွဲ ချင်နေ ပြီဆိုတာကို ဘယ်လိုသိနိုင်လဲ..?ချစ်သူကောင်လေးကို လမ်းခွဲချင်လာပြီဆိုရင် ယောက်ျားတွေ (ပါးစပ်ကနေ လမ်းခွဲရအောင်လို့တော့ ဖွင့်မပြောပေမယ့်) လုပ်ပြတတ်တဲ့ အပြုအမူတွေကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့… (၁)အေးစက်လာတာ.. ဒါကတော့ ပြတဲ့ လက္ခဏာတွေထဲမှာမှ အသိသာဆုံးတွေထဲက … Read more
ယခုလာမည့် New Year 2021 အင်္ဂလိပ်နှစ်ဆန်း၁ရက်နေ့၏ ထူးခြားချက်နှင့်အောင်မြင်မှုတွေ ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့ နိမိတ်…
ယခုလာမည့်2021 အင်္ဂလိပ်နှစ်ဆန်း၁ရက်နေ့၏ ထူးခြားချက် ဒီဇင်ဘာလအကုန် New Year အစ အင်္ဂလိပ်နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ 1.1 2021 နေ့ဟာ သောကြာနေ့ကျပါသည်။ သောကြာဆိုတာ အအေးဓာတ်ကိုဆောင်ပါတယ် သောကြာဂြိုလ်တိုင်ဟာ ပူးမင်း ဖြစ်ပြီး အေးချမ်း တိတ်ဆိတ်ခြင်းကို လိုလားတဲ့ အကောင်လေးပါ။ သောကြာသားသမီးတွေဟာ အေးအေးချမ်းချမ်းနေတတ်သူတွေဖြစ်သလို ထူးချွန်ထက်မြက် ချမ်းသာကြသူတွေလဲ များပါတယ်။ ၂၀၂၁ ရဲ့ တနှစ်တာလုံးဟာ လူသားအားလုံးအတွက် အေးချမ်း အောင်မြင်မှုတွေ ပြည့်မယ်ဆိုတဲ့ နမိတ်ပါ….။ ၂၀၂၀ မှာ Covid ကြောင့် ပူလောင်ခဲ့ရတာတွေဟာ ၂၀၂၁ မှာ အားလုံးပြီးဆုံးအေးချမ်းကြမဲ့ သဘောပါ…။ နှစ်ဆန်း ၁ ရက်နေ့ဟာ စနေနေ့ကျတာ ဟာ ဗေဒင်နမိတ်အရမကောင်းပါဘူး။ ၂၀၂၁ နှစ်ဆန်း ၁ ရက်ကတော့ … Read more
မြန်မာနိုင်ငံမွာ နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့၊ ကင်ဆာအလွယ်တကူဖြစ်စေမယ့် အရာ ၆ မျိုး
မြန်မာနိုင်ငံမွာ နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့၊ ကင်ဆာအလွယ်တကူဖြစ်စေမယ့် အရာ ၆ မျိုး ဒီနေ့ခေတ်လို အခြိန်အခါကြီးမွာ ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းဟာ အင်မတန်မွာ မြင့်တက်နေပါတယ်။ တော်တော်လေးကို သတိထားနေရပြီး၊ အထူးသဖြင့်ကင်ဆာမဖြစ်အောင် အစားအေသာက်ကို သတိထားနိုင်တာက အဓိကကလြာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမွာနေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အထဲက လူအျမားစုပေါ့ပေါ့ပါးပါးစားသုံးနေတဲ့ အစားအစာတွေဟာ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အဓိကအေကြာင်းအရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။ (၆)အသင့်စားစည်သွပ်ဘူးတွေ အဓိကက စည်သွပ်ဘူးမွာထည့်ထာတဲ့အစားအစာကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ထည့်တဲ့ သံဘူးဟာ ကြာရွည်ခံအောင် အန္တရာယ်တော်တော်လေးရွိတဲ့ BPA လို ဓာတုပစ္စည်းနဲ့စီမံထားလို့ပါပဲ။ သူ့ကိုတော့ ဟော်မုန်းဖြန့်ဖြူးတဲ့အရာအနေနဲ့ လူသျိမားတဲ့အတွက် ကင်ဆာလိုမြိုး ရောဂါတွေကို ဖြစ်ပွားအောင်တော်တော်လေး လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စည်သွပ်ဘူးတွေဝယ်တဲ့အခါကျရင် BPA လွတ်ကင်းကြောင်းပါတဲ့ စည်သွပ်ဘူးကိုပဲ ဝယ်ယူစားသုံးရမွာဖြစ်ပါတယ်။ (၅)အသင့်သောက်ဆိုဒါအခြိုရည် ဆိုဒါကို ဒီအတိုင်းကြီး သောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသင့်သောက်အခြိုရည်တွေကို လွန်လွန်ကြူးကြူးသောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် နွစ်ခုလုံးဟာ တော်တော်လေးကို အန္တရယ်ျမားပါတယ်။ ဥပမာ … Read more
ယောင်္ကျားဆိုတာ ခန္မာကိုယ်က ယောင်္ကျား ဖြစ်နေတိုင်း ယောင်္ကျားလို့ ပြောလို့ မရဘူး ၀ုန်း……..ကျွန်တော့် အခန်းတံခါးကို ဆောင့်ကန် ဖွင့်လိုက်သော အသံကြောင့် ကျွန်တော်ရော ကျွန်တော့် ချစ်သူပါ လန့်သွားပြီး။ အခန်း တံခါးပေါက်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မီးဝင်းဝင်း တောက်နေသော မျက်လုံးများနှင့် ကြည့်နေသော ကျွန်တော့် အဖေ။ ကျွန်တော့်ချစ်သူက မျက်နှာ လွှဲနေလိုက်ပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး ဧည့်ခန်းထဲကိုလာခဲ့ …..အဖေ ကပြောပြီး အပြင်ကို ထွက်သွားပါတော့သည်။ ချစ်သူကို အခွင့်အရေးယူရန် ကျိုးစားနေသော ကျွန်တော်။ အဖေ ကိုယ်တိုင် မိသွားသဖြင့် ရှက်စိတ် မွန်ပြီး ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိတော့ ကျွန်တော့် ချစ်သူလက်ကို လှမ်းအဆွဲ နေဦးလေ ကိုမောင်ရဲ့ကြည့်ကောင်းအောင် လုပ်ပါရစေဦး။ ကျွန်တော်တို … Read more
ရာသီခွင်တစ်ခုစီကနေ သင်ယူသင့်တဲ့ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အရာလေးတွေ (၂)
ရာသီခွင်တစ်ခုစီကနေ သင်ယူထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ရာသီခွင် ခြောက်ခုစာ ပြောပြထားသေးတဲ့အတွက် ကျန်တဲ့ ရာသီခွင် ခြောက်ခုဆီက ဘယ်လို အချက်တွေ ထပ်သင်ယူသင့်သလဲ ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Libra Libra တွေဆီကတော့ ကျေးဇူးသိတတ်တဲ့ စိတ်လေးကို သင်ယူထားသင့်ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ အရာရာကို သမားရိုးကျ ရှင်သန်ရတာထက် နေ့ရက်တိုင်းကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာလေးတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းချင်ကြသူတွေပါ။ သူတို့အပေါ် ကျေးဇူးရှိခဲ့တဲ့ သူတွေအတွက် ကျေးဇူးတရားကို ဖော်ပြတတ်တဲ့ သူတွေဖြစ်လို့ သူတို့ဆီက ဒီအချက်လေးကို သင်ယူထားသင့်ပါတယ်။ Scorpio Scorpio တွေဆီက သင်ယူထားသင့်တဲ့ အရာက balance ဖြစ်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ဆိုးသွမ်းတယ်လို့ ထင်ရတဲ့ scorpio တွေဟာ သူများကို မတရား မလုပ်တတ်ကြပါဘူး။ ရည်ရွယ်ချက် ကြီးမားပြီး နားလည်ရခက်တဲ့ … Read more
ညားကာစ လင်မယားကို စကားတစ်ခွန်းထဲနဲ့ ကွဲအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဘကြီး
ညားကာစ လင်မယားကို စကားတစ်ခွန်းထဲနဲ့ ကွဲအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ဘကြီး လက်ထပ်ပြီးတာမကြာသေးသောလင်မယား၂ ယောက် အိမ်ရှေ့မှာ အေးအေးလူလုထိုင်စကားပြောနေတုန်း ခြံရှေ့မှာအဘိုးကြီးတယောက် လာရပ်ကာ သမီး ဘကြီးဆီခဏလောက်ကွယ် မိန်းမဖြစ်သူက ဘကြီးအိမ်လိပ်စာမေးချင်လို့ ထင်ပါရဲ့ဟု ထိုင်ရာကထသွားတော့ အဘိုးကြီးကဒီလိုပါသမီးရယ် “ဘကြီးပြောတာ ဘယ်သူ့မှပြန်မပြောပါနဲ့ ” အဘိုးကြီးက ထိုမျှသာပြောကာ သူတို့အိမ်ရှေ့က ဆက်လက်ထွက်ခွာသွားလေရာ … မိန်းမဖြစ်သူမှာ ဘာကိုနားလည်ရမှန်းမသိဘဲ သူ့ယောက်ျားဘေး ပြန်လာထိုင်လေသည် “မိန်းမ ဟိုဘကြီးက ဘာပြောသွားတာလဲ” “အော် သူပြောတာ ဘယ်သူ့မှပြန်မပြောပါနဲ့တဲ့” “အေးလေ ဒါတော့ဒါပေါ့ ဒါပေမဲ့ မင်းနဲ့ငါက ချစ်လို့ယူထားတဲ့လင်မယားဘဲ ငါ့တော့ပြောပြ သင့်ပါတယ်” ” အင်းပါမောင်ရဲ့… ဘကြီးကသူပြောတာ ဘယ်သူ့မှမပြောပါနဲ့တဲ့” “မဟုတ်သေးဘူးလေကွာ တခြားသူတော့မပြောနဲ့ပေါ့ငါ့ကမင်းလင်လေ ငါ့ကိုတော့ မင်းမပြောဘဲနေလို့ရမလားဘာလဲ.. ဒီအဘိုးကြီးက မင်းနဲ့မကင်းမရှင်းဖြစ်ဘူး လို့လား…” “ရှင်နော် … Read more
မိန်းကလေးတွေ ဆွဲဆောင်မှု ရှိဖို့ဆိုတာ ခက်မလိုလိုနဲ့ အရမ်းကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ တချို့သူတွေကတော့ ကိုယ်မွေးကတည်းကပါလာတဲ့အရာကို ထုတ်မသုံးတတ်ကြတာပါ။ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကိုဆွဲဆောင်မှုအရှိစေဆုံးသောအရာတွေကတော့…. (၁)နှုတ်ခမ်း ကိုက်တာ မိန်းကလေးတွေနှူတ်ခမ်းကိုက်လိုက်တာဟာ ယာကျ်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့မေတ္တာတင်မကပဲ နှုတ်ခမ်းတစ်စုံက အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပါရရှိစေပါတယ်။ (၂)နူးညံ့တဲ့ အသားအရည် အသားရည်နူးညံ့တဲ့ မိန်းကလေးတွေထက် ဆွဲဆောင်မှုရှိတာ ဘာမှမရှိတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ပဲ ရှေးခေတ်ကတည်းက အီဂျစ်လူမျိုးတွေ ရောမလူမျိူးတွေက ခန္ဓာကိုယ်အမွှေးတွေကို ရိပ်သိမ်းခဲ့ကြတာလေ။ (၃)ဆံပင်ကိုရှင်းလင်းနေအောင်ချည်ထားတာ လည်ပင်းနဲ့ နားရွက်ပေါ်အောင် ဆံပင်စည်းထားတာကလည်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ပိုပြီးတော့အထာကျစေပါတယ်။ (၄)ထူးခြားတဲ့ပုံစံ ယောက်ျားလေးတွေက ထူးဆန်းတဲ့မိန်းကလေးတွေတွေ့ရင် အရမ်းကိုခင်မင်လိုစိတ်ပြင်းပြကြတယ်။ ဆန်းသစ်တီထွင်တတ်တဲ့သူတွေဟာ လူတိုင်းကိုဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ တက်တူး တို့ ဆံပင်အပြာရောင်ဆိုးထားတာတို့ဟာ စကားစပြောဖို့အခွင့်အရေးပေးတဲ့အရာတွေပေါ့။ (၅) ပခုံး အထက်ကနေ လျှပ်တစ်ပြတ်ကြည့်လိုက်တာ ပခုံးအထက်ကနေပြီးတော့ လျှပ်တစ်ပြတ်ပဟေဠိဆန်ဆန်ကြည့်လိုက်တာက ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ နှလုံးသားကိုတလှပ်လှပ်လုပ်သွားစေတဲံအချက်ပါ။ (၆)ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လှတယ်လို့ထင်တဲ့ မိန်းကလေးဟာအခန်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ … Read more
ဖခင်ဖြစ်သူကို ပစ်ထားခဲ့တယ်ဆိုပြီပြင်း ထန်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေခံနေရတဲ့ မြင့်မြတ်ဘက်က ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့တဲ့ ယုန်လေး ပရိသတ်ကြီးရေ သဘာဝမင်းသားလို့ပရိသတ်တွေ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတဲ့ မင်းသားချောမြင့်မြတ်ကတော့ သာယာပျော်ရွှင်စရာမိသားစုဘဝလေးကို တည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်တွေ အားကျချစ်ခင်ရတဲ့ သူလေးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာကျရာဇာတ်ရုပ်ကိုလည်း အပီအပြင်သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့သူလေးဖြစ်ပြီးအကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုကြီးကိုလည်း ရရှိထားသူတစ်ယောက်ပါနော်။ မြင့်မြတ်ဟာ အနုပညာလောကမှာလည်း နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ ရပ်တည်အောင်မြင်နေတာလည်းဖြစ်ပြီးဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသားတစ်ယောက်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ယမန်နေ့ကတော့ မြင့်မြတ်ရဲ့ဖခင် ဦးမြင့်ကျော်က သူဖုန်းခေါ်ရင် မြင့်မြတ်အနေနဲ့ဖုန်းကိုင်စေချင်တဲ့အကြောင်းမီဒီယာကတဆင့် ပြောကြားခဲ့တာကြောင့်မြင့်မြတ်အနေနဲ့ ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် ယနေ့မှာတော့ မြင့်မြတ်ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ယုန်လေးကဝေဖန်ခံနေရတဲ့ မြင့်မြတ်ဘက်က ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် ယုန်လေးက “အားလုံး ဆန္ဒမစောစေချင်ပါဘူး လူတိုင်းကို ကူညီနေတဲ့ မြင့်မြတ်စက်အဖွဲ့ က လူတစ်ယောက် ဒုက္ခရောက်ရင်တောင် ကူညီတဲ့ မြင့်မြတ် သူ့ အဖေ အမေ အရင်းမောင်နှစ်မ တွေကို ဘာမှမလုပ်ပေးဖူးဆိုတာဦးနောက် နဲ့ စဉ်းစားပေးကျပါ … Read more
သင်ရွေးချယ်တဲ့ထီးကတစ်ဆင့် သင့်ရဲ့စတိုင်နဲ့အချစ်ရေးကို ပြောပြပေးမယ် ၁. အပြာရောင်ထီး သင်ဟာ စမတ်ကျကျ ဝတ်စားဆင်ယင်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့် အဝတ်အစား ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တဲ့ နေရာမှာ စတိုင်ကျကျ၊ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ အထက်တန်းကျတဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှုမျိုးကို သာ ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်လေ့ ရှိပါတယ်။ သင်ဟာ ဘယ်အရာကိုမဆို သူ့အကန့်နဲ့သူ စနစ်တကျ စဉ်းစားလုပ်ဆောင်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆင်ခြင်တုံတရားရှိပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေရှိပါတယ်။ သင့်ပုံစံက အရမ်းထက်မြက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မို့လို့ တစ်ခါတစ်လေ ယောကျာ်းလေးတွေ အနေနဲ့ သင့်ကိုချဉ်းကပ်ဖို့ စိုးရိမ်ထိတ်လန့် နေရတတ်ပါတယ်။ ၂. အစိမ်းရောင်ထီး သင်ဟာ ပစ္စည်းအသစ်တွေကို စုဆောင်းရတာ နှစ်သက်မြတ်နိုးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဝတ်အစားအသစ်တွေကစလို့ သေးသေးမွှားမွှား ပစ္စည်းလေးတွေအထိ ဝယ်ယူစုဆောင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ အဝတ်အစား ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်တဲ့နေရာမှာ … Read more
အသက်အရွယ်ကြီး ရင့်သူတွေနဲ့ ပိုမိုသင့်တော်တဲ့ နှစ် ၁၀၀ သီးရဲ့ ကျန်းမာရေးစွမ်းပကားများ
အသက်အရွယ်ကြီး ရင့်သူတွေနဲ့ ပိုမိုသင့်တော်တဲ့ နှစ် ၁၀၀ သီးရဲ့ ကျန်းမာရေးစွမ်းပကားများ ကျန်းမာလိုသူတိုင်း နှစ်၁၀၀ သီးကိုစားပါ Hitotsubashi University ရဲ့ Kunitachi Campus မှာ ကမ္ဘာဦးပင် (Ginkgo) တွေကို လမ်းဘေးမှာ တန်းစီ စိုက်ထား ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ နှစ်တစ်ရာသီး လို့လဲ ခေါ်ပါတယ် (၁၀) မိနစ်လောက် ပြုတ် အအေးခံ အခွံနွှာ ဒညင်း သီး လို့ သဘောထားပြီး ငပိရေ နဲ့ အဝစား ပါတယ်။ နှမ်းဆီ နဲ့ ဆားဖြူး စားပြီး လဘက်ရည် ကြမ်း လေးနဲ့ သောက်ကြည့်ပါ။ ဆေးပညာမှာ ဘာတွေအသုံးကျလဲဆိုတော့ …. လေ့လာသိရှိရ သလောက် ကမ္ဘာဦးပင် (Ginkgo) … Read more